KuMassage Parlor naJane – Vanoda Zvinhu
KuMassage Parlor naJane
Wakamboenda kuMassage parlor here? IF you have not, you really must gieve it a short some day, Jane yaive regular client yangu kubasa kwangu and one dae akauya aine zvinhu zvisina kukwana and she needed a veeeeeeery big favour and she promised 2 do me a veeeeeeeeery big favour in return if i visited her at th parlour kwaanoshanda. One day i decided 2 pay her a visit and i called 2 book n appointment.
Ndakasvika ndikapinzwa mukati ndokubviswa hembe dze ndokushevewa choya chese nepasi pemahapwa. Ndakapinzwa mushower iye ndokubvisa hembe dzese ndokupindawo akamonerera towel. Ndakabva ndaudza one rule yekuti iye chete ndiye anemvumo yekundibata ini handidna mvumo yekumubata. Ndakatanga kugezswa ndichirakidzwa nzvimbo dzinofanirwa kugezwa dzese. Aiita achimbondipuruzira magaro, mboro nepasi pemachende. Takadzoka muroom medu ndokuatanga kuzorwazorwa zvakawanda zvakasiyana siyana. Ndakamboradzikwa nemusana nndikazogadzikwa pasofa.
Akatanga kundipuruzira mukati mezvidya ndokubonyo bonyora mboro yangu ndokufeeler pasi pemachende. Paakawona kuti yamira akatanga kuyamwa mboro nyce n slow. Ainyatsoisvisvina semwana arikudya lolipop achiita achimbonanzva nanzva kaburi kaye kanobuda nehuhoronyo, ombosvisvina jende one by one. Akawedzera mayamwiro ake apo achibatsira kubonyora nerimwe rwoko rimwe richidealer nemachende, akandirova iyoyo kusvika anwzwa ndaakuridza mhere akaziva kuti ndaakutunda. Humwe huronyo akameda humwe hukazara kumeso kwake. Ini ndakasara ndakafreezer pasofa ndichidedera nekunakirwa nematundiro andakange ndaita…….
· Last modified August 24, 2015 0
Pingback: Types of Vehicles()
Next story Dick size does matter: Advice from a Lady
Previous story Kusvira Mukadzi wemunhu